Waxa iiga baxay warkii oday Farmaajo!: Nin la soo qasbay oo dhibban (Qormo Faaqidaad ah) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Waxa iiga baxay warkii oday Farmaajo!: Nin la soo qasbay oo dhibban (Qormo Faaqidaad ah) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Qabkii iyo gobonimadii fagaarayaasha caalamiga in la soo celiyey ayuu noo sheegey! Balse wuxuu is-hilmaansiiyey in aag dagaal uu ka furey madaxtooyada qaranka looga talinayey oo uu qabtii soo celiyey!?Midnimada dadka iyo in laga fogaado isqabqabsi ayuu umadda ku wacdiyey ayadoo asaga iyo Raysulwasaarihii la og-yahay in aysan xataa salaanta iska qaadin.
La dirirka Musuqmaasuq iyo daahfurnaan dhaqaale ayaa ka mid ahayd fariintiisa, balse waxaa laga wada warqabaa meesha uu gaarsiiyey boobka iyo musuqa ka dhexjira hey’adaha Dawladda iyo doorashadaba, bal dib ugu laabo hantidhowrka qaranka warbixinadiisa!
Wuxuu sheegey in ciidamadii uu dhisay oo ay argagixisada la diriraan, AMISOM-na ay kala wareegi doonaan amniga dalka ayadoo la og-yahay in uu fasaxay in Shabaab canshuurta ka qaadato dekedda Muqdisho iyo hey’ado kale oo badan, ciidamadii qarankana uu sabab u noqday in ay aag isku galaan madaxtooyada dhexdeeda, AMISOM-na inta aan bixideeda laga hadlin maantay looga baahan yahay in ay madaxtooyada amnigeeda sii heyso, kalana dhexgasho ciidamada uu colaadda ka dhex-dhaliyey!?
Arrimaha doorashada wuxuu inkiray guddiyadii doorashada qabashadeeda loo igmaday iyo Raysulwasaarihii uu xilka doorashada ku wareejiyey 1-dii May 2021 barlamaanka hortiisa, wuxuuna xusay madaxda dawlad goboleedyadu in ay boobsiiyaan doorashada!? Haddii odayga hadaladiisii hore oo dhan uusan ka dhabayn, sidee lagu aaminayaa kuwiisa cusub ee marin-habaabinta u badan, midda kale sow ma oga in aan mar kale dadka la indha-sarcaadin karin.
Odayga xalay wuxuu u ekaa nin la soo qasbay oo dhibban, nin hadalkiisa ay soo qoreen kuwo caalam kale ku nool, nin ay la taliyaal u yihiin kuwo god iyo haadaan ka sii tuuraya, nin u afduuban kuwo aan ka naxayn oo ka faa’idaysanaya go’doonka siyaasadeed ee ay galiyeen!Duqa haloo gurmado haddii tolnimo jirto!